कोरोना सचेतना सम्बन्धि एन आर एन पूर्व अध्यक्ष जिवा लामिछानेको विचार | "हरेक घरमा धारो होस्, हरेक गाउँमा सिंचाइ होस्"
कोरोना सचेतना सम्बन्धि एन आर एन पूर्व अध्यक्ष जिवा लामिछानेको विचार
March 24, 2020 by POLAND NEPAL
महाभारतमा एक रोचक प्रशंग छ ।
जीवा लामिछाने एन आर एन पूर्व अध्यक्ष
पिता द्रोणाचार्यलाई छल गरेर पाण्डवहरुले मारेपछी अश्वत्थामा अत्यन्त क्रोधित भए । उनले पाण्डव सेना उपर अति भयानक हतियार ‘नारायण अस्त्र” प्रहार गर्ने निर्णय गरे । यस्तो हतियार भगवान बिष्णु, श्रीकृष्ण, श्रीराम, गुरु द्रोणाचार्य र उनका छोरा अश्वत्थामासंग मात्रै उपलब्ध थियो । यो यस्तो हतियार थियो युद्ध मैदानमा जसको कुनै प्रतिकार हुन सक्दैनथ्यो । यो अस्त्र प्रहार भए पछी युद्धमा हतियार सहित प्रस्तुत प्रतिपक्षको हरेक योद्दा उपर अग्नि बर्षा भएर ऊ त्यहीं भष्म हुन्थ्यो । हातमा हतियार नहुनेलाई भने यसले छुदैनथ्यो ।
भगवान् श्री कृष्णले यो कुरा थाहा पाएर पाण्डव पक्षका सम्पूर्ण सेनाहरुलाई आफ्ना सबै अस्त्र-शस्त्र जमिनमा फालेर प्रार्थनारत रहन निर्देशन दिए । पाण्डव सेना हात हतियार छोडेर चुपचाप प्रार्थनामा जुट्यो !
अश्वत्थामाले ‘नारायण अस्त्र’ छोडे तर त्यसले भस्म पार्ने प्रतिपक्षको युद्दरत एक सैनिक पनि फेला पार्न सकेन । छाडिएको नारायण अस्त्रको समय सकिएपछी यो निष्क्रिय भयो र युद्द मैदान शान्त देखियो । यसरी पाण्डव सेना नारायण अस्त्रको बिनासबाट बचें ।
यो त भयो एक पौराणिक कथा ।
मानौं, प्रकृति अहिले मानव जातिसंग रिसाएकी छिन । अहिले फैलिएको महामारीलाई प्रकृतिले मानव जाति उपर छोडेको ‘नारायण अस्त्र’ भन्ने अनुमान गरौँ । प्रकृतिको यस प्रकोपबाट बच्ज्नकालागि पाण्डव सेना हात हतियार फ्याकेर युद्द मैदानमा शान्त बसे झैं हामी पनि शान्तिपूर्वक अहिले घरमै बसौं । नारायण अस्त्रको समयावधि सकिएर निष्क्रिय भए झैं कोरोना पनि आफ्नो समयावधि पूरा गरे पछी शान्त हुनेछ ! त्यसैले Please calm down, keep social distancing and stay at home !
(यो बिचार उहाँको फेसबुक पोस्टबाट साभार गरिएको हो )
मरेपछिको बसाइ नै आप्रवास हो हामी आप्रवासी होइनौ पृथ्वीकै बासिन्दा हौ →